X-Box ရဲ့ “9” ကို ဘယ်လိုပုံဖော် ရိုက်ကူးထားလဲ
လူငယ်အဆိုရှင် X Box က ''9'' ဆိုတဲ့ Audio CD ကိုမိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သလို အခုတော့ မေလ 20 ရက်နေ ့မှာကျရောက်မဲ့ မွေးနေ ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေရဲ ့ရိုက်ချက်တွေနဲ ့အတူ ''9'' ကို Music Video အဖြစ်အသက်သွင်းပုံဖေါ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။
''9 ပေါက်'' Music Video သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ မေလ 11 ရက်နေ ့က Novotel Hotel မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ဒီအခွေကိုထုတ်ဖြစ်တာကလည်း သူ ့ရဲ ့ရူးသွပ်မူတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အကောင်ထည်ဖော်ဖြစ်တာ ဖြစ်တယ်လို ့ပြောခဲ့ပါတယ်။
''လူငယ်အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ အားပေးတဲ့လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကော?? ပရိတ်သတ်ကိုဘယ်လိုရသတွေပေးစွမး်နိုင်မလဲ?? အဲ့ဒီအတွေး ၀င်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို ့ကလိုင်းကြောင်သွားတယ်လို ့ပြောမလား။ မဆိုင်တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လည်း သရုပ်ဆောင်ရင်း သီချင်းဆိုနေတဲ့သူတွေရှိတာပဲလေ။ အဲ့တော့ ဒါကို ကျွန်တော်က စိန်ခေါ်မူတစ်ခုအနေနဲ ့ကော ရူးသွပ်မူတစ်ခုအနေနဲ ့ကော...အကောင်ထည်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တွေနဲ ့လည်း သေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သေချာအကောင်ထည်ဖော်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေလောက်တော့ သရုပ်ဆောင်တာ ကောင်းချင်မှကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်''
ဒီအခွေမှာတော့ သီချင်း 13 ပုဒ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ X Box နဲ ့အတူ ၀ါဆိုမိုးဦး၊ ခင်၀င့်၀ါ၊ နန်းဆုဦး၊ Sofia၊ မေရတီဇော် တို ့က ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
X Box က သူ ့ရဲ ့မွေးနေ ့ဖြစ်တဲ့ မေလ 20 ရက်နေ ့မှာ ရန်ကုန်မြို ့Junction Square မှာ အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုး ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ မန ္တလေးမှာလည်းသွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို ့ရှိနေပါတယ်။
X Box ရဲ ့''တနေ ့'' ဆိုတဲ့သီချင်းကို ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ''ကာယံ'' ကတော့ ''ဒီသီချင်းမှာ X Box ရဲ ့ငယ်ဘ၀ကိုတွေ ့ရလိမ့်မယ်လို ့ပြောပါတယ်။
''တစ်နေ ့ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကျွန်တော် စထွက်ကတည်းကကြိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ ့ဒီသီချင်းကို ရိုက်ကူးဖို ့အတွက်လည်း ကမ်းလှမ်းခံရတယ်။ အဲ့အတွက် ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာလည်း X Box ကသူ ့ရဲ ့ငယ်ဘ၀အကြောင်းလည်း နည်းနည်းပါချင်တယ်လို ့ပြောပါတယ်။ အဲ့တော့ သူ ့ရဲ ့ငယ်ဘ၀နဲ ့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို ့ကို ပေါင်းပြီးတော့ အကောင်းဆုံးပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်။ အဲ့သီချင်းကို ထွက်လာရင်တော့ သေချာစောင့်ကြည့်ပေးပါလို ့ပြောချင်ပါတယ်''